मोटोपनाले चिन्तित हुनुहुन्छ ? निम्न कुरामा ध्यान दिनुस:डा.गैह्रे(भिडियो सहित ) « Safal Post
मोटोपनाले चिन्तित हुनुहुन्छ ? निम्न कुरामा ध्यान दिनुस:डा.गैह्रे(भिडियो सहित )
नवलपरासी । मोटोपना कसरी घटाउने,तौल कसरी कम गर्ने ? अहिले धेरैको निम्ती टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ यो । यसैको समाधानका लागि कोही जिम धाइरहेका छन्, कोही योगको शरणमा पुगेका छन् । कसैले चिकित्सकिय विधी अपनाएका छन्, कसैले खानामा कटौती गरेका छन् ।
तौल बढ्नु वा मोटोपन आफैमा समस्या हो।यसले अरु समस्यालाई समेत निम्त्याउँछ।शरीर भद्दा र असुहाउँदिलो देख्ने मात्र होइन,उच्च रक्तचाप,मधुमेह जस्ता दीर्घ रोगको खतरा पनि बढाउँछ । त्यसैले अहिलेका पुस्ताका निम्ति मोटोपन वा तौल नियन्त्रण ठूलो चुनौती बनेको छ ।
मोटोपनाले चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने निम्न कुरामा ध्यान दिनुस् :
१,शारीरिक व्यायाम प्रशस्त मात्रामा गर्ने जस्तैः १ घण्टा हिड्ने , खेतबारीमा काम गर्ने,खेलकुदमा भाग लिने ,पौडी खेल्ने ।
२,गुलियो र चिल्लो खाने कुराको सेवन अत्यन्त कम गर्ने । जस्तैः चिनी,मिठाई ,घ्यू,वटर,चिज,पनिर,तेल,आदि ।
३,खाना खानु भन्दा अगाडी १ कटौरी हरियो सलाद खाने बानी गर्ने ।रातीको खानामा २ पिस रोटी+१ कटौरी हरियो सागसब्जी सलाद+सुप खाने ।
४,प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने ।
५,धूम्रपान , मद्यपान , सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने । जस्तैः रक्सी,चुरोट,खैनी,पान,सुर्ती,बिडी , आदि ।
६,योग,ध्यान,प्राणयाम गर्ने र तनावमुक्त जीवन जिउने । जस्तैः- सूर्य नमस्कार,कपालभाती,भस्त्रिका,सूर्यवेदी आदि ।
नोट :खानामा रोठी/भातको मात्रा २०%-४०% र हरियो सागसब्जी सुपको मात्रा ६०%-८०% हुनुपर्दछ ।(डा.यन्जन गैह्रे हिमालयन योग तथा प्राकृतिक अस्पताल र काठमाडौँ नेचुरोपेथी अस्पतालका निर्देशक हुनुका साथै योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् ।) भिडियो: